Home News XOG: Maxeey tahay sababta Dowlada dhexe u diiday in Maamul loo Sameeyo...
XOG: Maxeey tahay sababta Dowlada dhexe u diiday in Maamul loo Sameeyo Marko!!
Tan iyo markii si toos ah Al-shabaab looga saaray Magaalada Marko ee xarunta gobolka Sh/hoose waxaa halkaasi ka jira Maamul la’aan iyadoo ay ka arimiyaan Saraakiisha Ciidamada xoogga.
Maxamed cali oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Magaalada marko ayaa sheegay in ay dhowr jeer la hadleen Maamulka k/galbeed iyo dowlada dhexe islamarkaana lagu wargeliyay in markii lagu heshiiyo cida soo magacaabeeyso iyaga laga tali gelin doono.
MOL oo arinkaani u dhaba-gashay ayaa ogaatay in Wasaarada arrimaha gudaha iyo federaalka ay qorsheeysay shaqsiga marko lo magacaabi lahaa hase’yeeshee ay diideen Maamulka k/galbeed,taas ayaan qasabtay in Marko Maamul La’aan ahaato.
Odayaasha dhaqanka ayaa waxaa ay si deg deg ah ugu baaqayaan in Maamul shacabku rabo lasoo dhiso,sababta is qabqabsiga keentay ayaa lagu micneeyay in dowladu ay daneeyneeyso maamulida magaaladaasi